Akụkọ kachasị ọhụrụ banyere Ụlọikpe Kasị Elu FCT si Nigeria & ụwa | TAA
Home Tags Ụlọikpe Kasị Elu FCT
Ụlọikpe Kasị Elu FCT
Ndị uweojii: Olee otú otu onye isi ohi zuru nwanyị si enweta mmiri n'okpuru akwa
Ndị uweojii ekwuola na nwanyị ahụ zuru ohi na ụlọ ndị Senate na Wednesday ga-agbapụta n'okpuru mgbapụ tupu ọnụ ụzọ ámá obodo Abuja.
Onye gburu di Maryam Sanda gbara ya akwụkwọ ka ọ gbaa alụkwaghịm tupu onye nwụrụ ọnwụ
Ụlọikpe Kasị Elu nke FCT nọ na Jabi na Thursday nụrụ na Maryam Sanda rịọrọ maka ịgba alụkwaghịm tupu ọnwụ di ya.
Ụlọikpe na-agbagha alụmdi na nwunye 10 afọ na-eme ihe ike nke nwanyi
Ụlọikpe Kasị Elu nke FCT, Kubwa, Abuja na Monday kpochapụrụ alụmdi na nwunye 10 dị n'etiti otu Ekpolador Koinya na Onajero Gloria maka ọdịda ike ya.
ICPC: Nnwale nke ex-IGP Sunday Ehindero n'ihi ebubo N64 ijeri wayo iji malitegharịa
Ụlọrụ na-emebi iwu na ndị ọzọ na-akpata mmejọ iwu (ICPC) na-ekwu na a ga-amaliteghachi ikpe ikpe nke mbụ Onye Nyochaa-General nke ndị uweojii (IG), Sunday Ehindero, n'ihi ebubo ụgha nke N16.
Ụlọikpe kpochapụrụ ikpe IGP Ibrahim Idris megide Senate
Ikpe ziri ezi Abba-Bello Muhammad nke Ụlọikpe Kasị Elu nke FCT, Abuja na Tuesday wepụrụ akwụkwọ ahụ onye Inspector General nke ndị uweojii, Ibrahim Idris dere, na-ekwu na ọ bụ ihe isi ike ndị isi ya ka Senate.
Mmadụ kwadoro ebubo a na-ekwu na ya bụ $ 328,974 aghụghọ
Kọmitii Mpụ na Ụba Ego (EFCC) na Tuesday mere mkpesa nwoke 39, Austin Osaretin, na Ụlọikpe Kasị Elu nke FCT, Apo, gbasara ebubo 328,974.37 dollar.
Onye nduzi nchịkwa nke napụrụ ụlọ 86 ka ọ bụrụ onye ọchịchị na-akwụsị ịkwụsị ikpe ikpe
Ụlọikpe Kasị Elu nke FCT, nke nọ ọdụ na Apo, na Monday gara n'ihu na-anụ ikpe n'okwu ahụ nke ebubo na ya agaghị ekwupụta ihe na-enweghị ezi ngọpụ megide ụmụnna Tumsa, Ibrahim na Tijjani.
Ndị ọkàiwu ndị Alakụba na-akpakọrịta na-agbaso koodu uwe agbamakwụkwọ FCT ọhụrụ
Mkparịta ụka ọhụrụ banyere usoro ejiji ejiji maka ndị ọkàiwu iwu na-esonyere ndị Òtù Iwu Iwu nke ndị Alakụba nke Nigeria jụrụ iwu ọhụrụ site na Ụlọikpe Kasị Elu nke Federal Capital Territory, Abuja, banyere otú ndị ọkàiwu kwesịrị isi ejiji.
Onye nduzi nke president Jonathan nyere aka na ndepụta nke ebubo ndị a na-eburu na APC
Onye bubu onye inyeaka nye President Goodluck Jonatan, Reno Omokri, emeela ka Gomenti Federal na Minista nke Ozi na Omenala, Lai Mohammed, kpuchie onu ogugu abuo nke ndi ochichi na-acho.
EFCC: Anyị anaghị atụ egwu ma ọ bụ mee ka ndị a na-enyo enyo n'oge a gbara ajụjụ ọnụ
Miss Zahra Abubakar, onye na-agba akaebe nke abụọ (PW2) n'ime ikpe n'ime ikpe gbasara ebubo NVNUMX nde Naval, na Thursday gwara Ụlọikpe Kasị Elu nke FCT na usoro iwu EFCC maka ịchọpụta ndị a na-enyo enyo adịghị etinye egwu ma ọ bụ ntinye.
Senator Dino Melaye na-ekwusi egwu maka ndụ
Onye na-akwadochite akwụkwọ Kogi West Senatorial, Senator Dino Melaye, rịọrọ onye Inspector General nke ndị uweojii, Ibrahim Idris, na ọtụtụ ụwa zuru ike banyere ihe ọ kọwara dịka ihe iyi egwu ndụ ya.
Senator Melaye: agbaghị m Nigeria
Kogi West Senator, Dino Melaye, agọnahụla na-agba ọsọ Naijiria maka ahụhụ ọ na-eme n'oge na-adịbeghị anya.
Iwu ikpe kachasị elu nke Kenny Martins mere ka e kwuo na ọ bụ aghụghọ N7.7
Ụlọ ikpe kachasị elu ekpebiela akwụkwọ mkpesa nke Kenny Martins gbara akwụkwọ, na-ama ikpe ikpe nke ụlọ ikpe ikpe na Abuja, banyere ikpe ya.
Enweghi ikpe nke ikpe ụlọikpe nke Maryam Sanda
Enweghi ike ịgba akaebe na Monday gafere n'ihu ikpe ahụ na ebubo a na-egbu ọchụ megidere Maryam Sanda, na ndị ọzọ atọ n'ihu ikpe ziri ezi Yusuf Halilu nke Ụlọikpe Kasị Elu nke FCT, Jabi.
Maryam Sanda: Ụlọ ikpe na-ekwenye ikpe na-ekwenyeghị na ebubo igbu ọchụ
Iwu ndị uweojii na Federal Capital, Abuja, gwara Monday na Ụlọikpe Kasị Elu nke FCT dị na Jabi ka ọ kwụsị akwụkwọ ahụ Maryam Sanda na ndị mmekọ atọ ya kwadoro, na-agba aka mgbagha maka ebubo ndị e boro ha maka ọnwụ nke di ya, Bilyamin Bello.
NJC kwadoro Abia CJ Theresa Uzokwe
Ụlọikpe Nchịkọta Mba (NJC) akwadoro Onyeikpe Kasị Elu nke Abia State, ikpe ziri ezi Theresa Uzokwe, maka ịla ezumike nká.
Ụlọikpe na-agbagha, gbaghaara onye ọkwọ ụgbọala 43 na-ekwu na ọ ga-egbu ọchụ
Ụlọikpe Kasị Elu nke FCT, nke nọ na Apo na Wednesday, gbaghaara ma ọ bụ gbapụ onye ọkwọ ụgbọala 43, Joshua Lawal, ebubo ikpe ọnwụ.
Ụlọ ikpe na-eme ndị uweojii N3m iwu maka imebi iwu ziri ezi
Ụlọikpe Kasị Elu nke FCT, Maitama na Tuesday nyere ndị uweojii iwu ka ha kwụọ N3 nde na otu Kingsley Efobi, maka mmebi nke ikike ya bụ isi maka nnwere onwe onwe ya.